होटलमा श्रीमतीसँग २५ मिनेट बसेर मेरो शरीरमा तिमीले आगो लगाउनु है सुष्मा भन्दै प्रेम बिवाह गरेका सम्राटले गरे झुण्डिएर आत्महत्या ! – Etajakhabar
होटलमा श्रीमतीसँग २५ मिनेट बसेर मेरो शरीरमा तिमीले आगो लगाउनु है सुष्मा भन्दै प्रेम बिवाह गरेका सम्राटले गरे झुण्डिएर आत्महत्या !
अर्घाखाची – घरपरिवारले आफ्नो प्रेम बिबाह अस्विकार गरेकै कारण अर्घाखाचीमा एक युवकले फेसबुकमा सूसाईट नोट लेखेर आत्महत्या गरेका छन् । जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका ११ क २३ वर्षीय सम्राट भुषालले सन्धिखर्क स्थित एक होटलमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका हुन् ।
करिब दुई हप्ता अघि प्रेम बिबाह गरेका भुषालले आत्महत्या गर्नु अघि आफ्नो फेसबुकमा ‘आफुले सोचेको कुरा पुरा नभए पछी जिन्दगि जिउन धेरै गारो हुदो रहेछ’ ‘सबैको आस मरिसक्यो अब मलाई’ जस्ता स्टाटस लेखेका थिए ।
बिहिबार त्रिबेणी होटलमा श्रीमती सुष्मा क्षेत्रि संग करिब २५ मिनेट संगै बसेका थिए । उनलाई त्यहि छाडेर श्रीमती फर्किएको र बेलुकी एक्लै बस्ने भन्दै नाम लेखाएका भुसाल शुक्रबार बिहान होटलका कर्मचारीले हेर्न आउदा झुन्डिएका अवस्थमा भेटिएका थिए ।
उनको फेसबुक स्टाटस अनुसन्धान गर्दा प्रेम बिबाह घरपरिवार ले अस्विकार गरेकाले आत्महत्या गरेको हुन् सकने जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाची का सूचना अधिकारी प्रदिप डिसीले बताए । घटनाको थप अनुसन्धान भैरहेको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ०६, २०७५ समय: १३:३८:३६